Life Risking Romance ( 2016 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ IMDb 5/10 ရရှိထားတဲ့ Thriller & Melodrama အမျိုးအစား Korea ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားလေးထွက်တဲ့နေ့က December 14 ဆိုတော့ သိပ်တော့ မကြာသေးတဲ့ ဇာတ်ကား အသစ်လေးပါ ....
အဓိက သရုပ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ ကိုရီးယား နာမည်ကြီး မင်းသမီး တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Secret Garden တို့ Empress Ki စတဲ့ နမည်ကြီးဇာတ်ကားတွေရဲ့ သရုပ်ဆောင် Ha Ji Won နဲ့ အတူ
Chun Jung Myung ... ပြီးတော့ ထိုင်ဝမ် မင်းသားချောလေး Chen Bolin တို့က သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ် ...
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးပြောရရင် ဂျေအင်း ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက သည်းထိတ်ရင်ဖိုတွေ မှု့ခင်းဝတ္ထုတို့ ရေးတဲ့ စာရေးဆရာမ .... ဒါပေမဲ့ သူက တစ်အုပ်လောက်ပဲ ထွက်ပြီ နှစ်အတော်ကြာအောင် စာအုပ် မရေးနိုင်တဲ့သူ ... ဒါနဲ့ပဲ သူ့ရဲ့ စုံထောက် ငယ်သူချင်း လော့ယန် နဲ့ အတူ သူ့ရဲ့ နောက်စာအုပ်တစ်အုပ်ရေးဖို့ ကွင်းဆက်လူသတ်သမားအကြောင်းကို လိုက်စုံစမ်းကြတယ် ... အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ဂျေဆင် ချမ် ဆိုတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ ယောကျာ်းတစ်ယောက် သူတို့နဲ့ ကြုံတွေ့လာတယ် .... စာရေးဆရာမလေး ဂျေအင်းက ကွင်းဆက်လူသတ်သမားကို ဖော်ထုတ်ပြီး သူ့နောက်ထပ် စာအုပ်ကို ထုတ်နိုင်မလား ???
ဘဝနဲ့ ရင်းပြီး စွန့်စားတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးက ဘာဖြစ်မလဲ???
ရယ်စရာလည်းပါသလို ထိတ်လန့်ရင်တုန် စရာတွေလည်း ပါပါတယ် ... ဇာတ်လမ်း လှည့်ကွက်လေးတွေ အရမ်းကောင်းတယ်နော် .... လက်မလွတ်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်လို့ ကြည့်ရှု့ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ ...
Download on V.I.P Link ( 655 MB )
Download on pcloud Link ( 655 MB )
Comedy Korea Melodrama Thriller
Labels: Comedy Korea Melodrama Thriller